အာဆီယံ-အိန္ဒိယ လွတ်လပ်စွာကုန်သွယ်မှုသဘောတူညီချက်အား ပြန်လည်သုံးသပ်ပြင်ဆင်ရန် အိန္ဒိယကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးက တိုက်တွန်းပြောကြားခြင်း | Commerce Journal
Home » -ပြည်ပရှိမြန်မာသံရုံးများမှပေးပို့သောသတင်းများ » အာဆီယံ-အိန္ဒိယ လွတ်လပ်စွာကုန်သွယ်မှုသဘောတူညီချက်အား ပြန်လည်သုံးသပ်ပြင်ဆင်ရန် အိန္ဒိယကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးက တိုက်တွန်းပြောကြားခြင်း » အထွေထွေ
အာဆီယံ-အိန္ဒိယ လွတ်လပ်စွာကုန်သွယ်မှုသဘောတူညီချက်အား ပြန်လည်သုံးသပ်ပြင်ဆင်ရန် အိန္ဒိယကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးက တိုက်တွန်းပြောကြားခြင်း
Tue, 10/12/2021 - 13:01 -- journal_editor
၂၀၀၉ ခုနှစ်၌ လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပြီး ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ်မှ စတင်အကျိုးသက်ရောက်လျက်ရှိသော အာဆီယံ-အိန္ဒိယ လွတ်လပ်စွာကုန်သွယ်မှု သဘောတူညီချက်အား တတိယနိုင်ငံများ၏ အလွဲသုံးစားပြုမှုမှ ကာကွယ်နိုင်ရေးအတွက် ပြန်လည်သုံးသပ်မှုများလုပ်ဆောင်လျက် ပြင်ဆင်ရန်လိုအပ်မည်ဟု အိန္ဒိယကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးနှင့်စက်မှုဝန်ကြီး Mr. Piyush Goyal က ၈-၁၀-၂၀၂၁ နေ့၌ တိုက်တွန်းပြောကြားလိုက်ပါသည်။
အိန္ဒိယပြည်ပရေးရာဝန်ကြီးဌာနနှင့် Confederation of Indian Industry (CII) ကုန်သည်အသင်းတို့ ပူးပေါင်းစီစဉ်လျက် ၂၀၂၁ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ ၇-၈ ရက်နေ့များ၌ ဗွီဒီယိုကွန်ဖရင့်စနစ်ဖြင့် ကျင်းပသော Indo - ASEAN Business Summit ညီလာခံ၏ ဒုတိယနေ့ရက် ဒေသတွင်းကုန်သွယ်ရေးဝန်ကြီးများ ဆွေးနွေးပွဲအစီအစဉ်သို့ တက်ရောက်၍ မိန့်ခွန်းပြောကြားရာတွင် ဝန်ကြီး Mr. Piyush Goyal က လက်ရှိကာလ၌ အိန္ဒိယနှင့်အာဆီယံ ဒေသတွင်းနိုင်ငံများအကြား ကုန်သွယ်မှုပမာဏမှာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၈၀ ဘီလီယံ ခန့်ရှိပြီး အိန္ဒိယ၏ အာဆီယံနိုင်ငံများထံမှ ကုန်စည်တင်သွင်းမှုမှာ တစိုက်မတ်မတ် တိုးတက်လျက်ရှိကြောင်း၊ သို့ရာတွင် အိန္ဒိယ၏ပို့ကုန်များအား အာဆီယံဈေးကွက်သို့ တင်ပို့နိုင်မှုမှာ အပြန်အလှန် FTA အကျိုးခံစားခွင့်များမရရှိခြင်း၊ အကောက်ခွန်မဟုတ်သောအတားအဆီးများရှိနေခြင်း၊ အာဆီယံနိုင်ငံများ၏ သွင်းကုန်ဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၊ ကိုတာနှင့်ပို့ကုန်အခွန်များ ချမှတ်ထားခြင်း စသည်တို့ကို ကြုံတွေ့နေရကြောင်း၊ အထူးသဖြင့် အိန္ဒိယ၏ လယ်ယာထွက်ကုန်နှင့်မော်တော်ယာဉ်ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများအား အာဆီယံနိုင်ငံများသို့ တင်ပို့ရာ၌ ကန့်သတ်မှုများစွာရှိနေကြောင်း၊ ၂၀၂၂ ခုနှစ်တွင် အာဆီယံနှင့်အိန္ဒိယနိုင်ငံတို့အကြား ကုန်သွယ်မှုပမာဏ ဒေါ်လာဘီလီယံ ၂၀၀ အထိရရှိရေး ရည်မှန်းချက်သို့ ရောက်ရှိနိုင်ရန်မှာ အလှမ်းကွာဝေးနေဆဲဖြစ်ကြောင်း၊ သို့ဖြစ်ရာ မျက်မှောက်ကာလ ကုန်သွယ်မှုအလေ့အထများ၊ လုပ်နည်းစနစ်များနှင့်လိုက်လျောညီထွေမှုရှိစေရေးအတွက် အာဆီယံ-အိန္ဒိယ လွတ်လပ်စွာကုန်သွယ်မှု သဘောတူညီချက် (AITIGA) ကို ပြန်လည်သုံးသပ်ပြင်ဆင်မှုများပြုလုပ်ရန်လိုအပ်ကြောင်း၊ ဤသို့လုပ်ဆောင်ခြင်းဖြင့် ၎င်းသဘောတူညီချက်အား အာဆီယံပြင်ပ တတိယနိုင်ငံများ၏ အလွဲသုံးစားပြုမှုမှ ကာကွယ်နိုင်မည်ဖြစ်ကဲ့သို့ နှစ်ဦးနှစ်ဖက်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုကို အထောက်အကူပြုလျက် စစ်မှန်သည့် ကုန်သွယ်ရေးမြှင့်တင်မှုကို ဖြစ်ပေါ်စေမည် ဖြစ်ကြောင်း စသည်ဖြင့် ပြောဆိုပါသည်။
အိန္ဒိယနိုင်ငံ၏ Covid-19 ကပ်ရောဂါ ကာကွယ်ထိန်းချုပ်မှု အစီအမံများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ အရှေ့လှမ်းမူဝါဒ (Act-East Policy) အား အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်မှုနှင့်အတူ ၂၀၂၀ ပြည့် နှစ် နိုဝင်ဘာလ ၁၂ ရက်နေ့၌ ကျင်းပခဲ့သော ၁၇ ကြိမ်မြောက် အာဆီယံ-အိန္ဒိယ ထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲတွင် အာဆီယံ Covid-19 ကပ်ရောဂါ တုန့်ပြန်မှု ရန်ပုံငွေအစီအစဉ်၌ အိန္ဒိယနိုင်ငံမှ ထည့်ဝင် ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်သည်ကို ဝန်ကြီးချုပ် နာရင်ဒရာမိုဒီက ထုတ်ဖော်ကြေညာခဲ့ပြီး ဖြစ်ကြောင်း၊ ယခုအခါ အိန္ဒိယနိုင်ငံတစ်ဝန်း၌ လူဦးရေ သန်း ၉၃၀ ကျော်ကို ကာကွယ်ဆေးထိုးပြီးဖြစ်ကြောင်း၊ လာမည့် ရက်သတ္တပတ် အနည်းငယ်အတွင်း အရွယ်ရောက်သူ လူဦးရေ အားလုံးကို Covid-19 ကာကွယ်ဆေး ထိုးနှံပြီးစီးမည်ဟု ခန့်မှန်းထားပြီး နောက်ထပ် ၃ လမှ ၄လအတွင်း ကာကွယ်ဆေး ၂ ကြိမ် အပြည့်အဝထိုးနှံပြီးလိမ့်မည်ဟု မျှော်မှန်းထားကြောင်း၊ အိန္ဒိယနိုင်ငံသည် Covid-19 ကပ်ရောဂါ ကာလအတွင်း PPE ဝတ်စုံများအပါအဝင် အရေးပါသည့် ဆေးနှင့်ဆေးပစ္စည်းများကို လုံလောက်စွာထုတ်လုပ်နိုင်သည့်အပြင် နိုင်ငံတကာသို့လည်း ထောက်ပံ့ပေးခဲ့ကြောင်း၊ ကမ္ဘာ့ဆေးဝါးထုတ်လုပ်မှုတွင် အချက်အချာအဖြစ်တည်ရှိမှုနှင့်အညီ အိန္ဒိယနိုင်ငံအနေဖြင့် အာဆီယံ နိုင်ငံများ၏ယေဘုယျဆေးဝါးများနှင့် ကာကွယ်ဆေးများထုတ်လုပ်မှုတွင် အပြည့်အဝ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းဖြင့် ဝန်ကြီး Mr. Piyush Goyal က ပြောကြားပါသည်။
ယခုနှစ်သည် အာဆီယံနှင့်အိန္ဒိယနိုင်ငံတို့၏ မိတ်ဖက်ဆက်ဆံမှု ၂၅ နှစ် ပြည့်သည့်နှစ်ဖြစ်ပြီး အိန္ဒိယ၏ အာဆီယံနိုင်ငံများနှင့်ကုန်သွယ်မှုမှာ ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ်တွင် ပို့ကုန်တန်ဖိုး ဒေါ်လာ ၂၃ ဘီလီယံနှင့်သွင်းကုန်တန်ဖိုး ဒေါ်လာ ၃၀ ဘီလီယံရှိရာမှ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၌ ပို့ကုန်တွင် ဒေါ်လာ ၃၀ ဘီလီယံနှင့်သွင်းကုန်၌ ဒေါ်လာ ၄၄ ဘီလီယံသို့ တိုးတက်လာခဲ့သည်။ အဆိုပါ ဆွေးနွေးပွဲ၌ အာဆီယံ-အိန္ဒိယ ကုန်စည်ကုန်သွယ်မှုဆိုင်ရာ သဘောတူညီချက် (AITIGA) အား သုံးသပ်မည့် နယ်ပယ်များ ညှိနှိုင်းသတ်မှတ်ခြင်းကို လျင်မြန်စွာနိဂုံးချုပ်လျက် ပြန်လည်သုံးသပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ် စတင်ဆောင်ရွက်နိုင်စေရေး ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ရန် ဝန်ကြီး Mr. Piyush Goyal က အာဆီယံ ကုန်သွယ်ရေးနှင့် စီးပွားရေးဝန်ကြီးများသို့ တိုက်တွန်းပြောကြားခဲ့သည်။
အဆိုပါ ညီလာခံဆွေးနွေးပွဲ၏ ဒေသတွင်းကုန်သွယ်ရေးဝန်ကြီးများ မျက်နှာစုံညီဆွေးနွေးမှုအစီအစဉ်သို့ ဘရူနိုင်း၊ ကမ္ဘောဒီးယား၊ လာအို၊ အင်ဒိုနီးရှား၊ မြန်မာ၊ ဖိလစ်ပိုင်နှင့်ထိုင်းနိုင်ငံများမှ စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး ဝန်ကြီးများ ပါဝင်တက်ရောက်လျက် အသီးသီးမိန့်ခွန်းပြောကြားခဲ့ကြကြောင်း သိရှိရသည်။
Source: 1. Shri Piyush Goyal calls called upon the ASEAN bloc to do away with Non-Tariff Barriers, 8-10-2021, Press Information Bureau of India
2. Goyal stresses on re-negotiation of FTA with ASEAN to stop misuse, 9-10-2021, Business Standard